Ukuhlaziya Ukusakaza Komphakathi ngeDathaSift | Martech Zone
Ukuhlaziya Ukusakaza Komphakathi ngeDathaSift
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2011 NgoLwesibili, Septhemba 25, 2012 Douglas Karr
IdathaSift iyinkundla yokuhlunga idatha yemidiya yezenhlalo yesikhathi sangempela enamandla futhi ingenye yezinkampani ezimbili kuphela emhlabeni ezinelayisensi yokwenza Twitter idatha etholakala ngokuthengisa ngezinhloso ezingabonisi, okuvumela abasebenzisi ukuthi baseshe okuthunyelwe besebenzisa imethadatha equkethwe kuma-tweets. Futhi yenza kanjalo ngesibonisi esihle ngokumangazayo kanye ne kanjiniyela console futhi ngamandla API (imitapo yolwazi yamakhasimende iyatholakala) ngolimi lwayo lokubuza.
ukuxhumana.okuqukethwe YILUPHI “HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony”
IDataSift yasungulwa ngu UNick Halstead ukusiza izinhlangano zithuthukise ukuqonda kwazo kanye nokusetshenziswa kweSocial Media. IDataSift igxile ekukhiqizeni ubuchwepheshe bokuhlunga idatha nobuciko besimanje ku-Big Data. IDataSift iqale impilo yayo njengehlumela kusuka TweetMeme, insizakalo yokuphakelwa kwezindaba ye-Twitter ethandwa kakhulu. Ngemuva kokubona ukuthi izinhlangano zeSocial Media ziyithinte ngokushesha kangakanani izinhlangano, uNick Halstead waqala ukwakha ipulatifomu yokusiza izinkampani ukuphatha i-Social Media nokwenza inzuzo ngemininingwane engatholakala ngaphakathi kwedatha.
I-DataSift ayilinganisi ukusesha okususelwa kumagama angukhiye futhi ivumela izinkampani zanoma yisiphi isayizi ukuthi zichaze izihlungi eziyinkimbinkimbi ngokwedlulele, kufaka phakathi indawo, ubulili, imizwa, ulimi, kanye nethonya elisuselwa kumamaki weKlout, ukuhlinzeka ukuqonda okusobala nokucacile. Ubuchwepheshe beDathaSift bungafaka futhi inqubo yokuhlunga idatha kunoma yikuphi okuqukethwe okumelelwe njengesixhumanisi kokuthunyelwe uqobo, kunikeze izinkampani isithombe esinembile, esiphelele.
Imithombo yezokuxhumana ikhulise isimo sebhizinisi esivele sishesha namuhla. Izinkampani azinakho ukunethezeka ukuhluza ngamakhulu ezigidi zemifudlana yedatha nsuku zonke, kuphela ukuqagela okwesibili isenzo esifanelekile. Abakudingayo ukufinyelela okucacile ekuhlakanipheni kwesikhathi sangempela okunomthelela ebhizinisini labo - okubavumela ukuthi bathole kalula futhi ngokushesha futhi baphendule imicimbi emikhulu ethrendayo, isimilo senhlalo, okuthandwa ngamakhasimende - futhi ekugcineni, bagweme noma yiziphi izinkinga ezisondelayo. Simangalisiwe ngokufunwa kwesikhulumi sethu e-US futhi sivula ihhovisi ukubhekana nalesi sidingo. Umsunguli, uNick Halstead.
Izicelo ezingaba khona zeDataSift cishe azinamkhawulo, kufaka phakathi ukumaketha, ukukhangisa kanye nokwenziwa kwamakhasimende, phakathi kokunye okuningi. I-DataSift ifaka imodeli yamanani asuselwa efwini ngezinketho zokukhokha njengoba usaya noma izinketho zokubhaliselwe, ezilungele izinkampani noma abantu banoma iluphi usayizi.
Tags: i-datasiftukuhlaziywa kwezokuxhumanaukusakaza komphakathi
Isebenza kanjani i-Google Adwords